बुटवलका एक युवाले आफै बनाए यस्तो खतरा कार!!अन्कित बराईली(भिडियो) « Np Online TV
बुटवलका एक युवाले आफै बनाए यस्तो खतरा कार!!अन्कित बराईली(भिडियो)
बुटवलका एक युवाले अचम्मको चमत्कार देखाएका छन । उनले आफैले कार बनाएका छन । यो कार बनाउने ब्यक्ती बुटवलका अन्कित बराईली हुन । आज यहाँ उनै ब्यक्तिसङ भाग्य न्यौपानेले अन्तरबार्ता लिएका छन । भाग्य न्यौपाने आफै पनि कार भित्र चडेर यात्रा गरे । यो कार हेर्दा नै यति आकर्षक बनेको छ । जो सुकै को मन लोभ्याउन सक्ने यस्तो कसरी बनाए अन्कितले आउनुहोस हेरौ भिडियोमा :